4 Calaamadood Oo Ku Tusinaya Inaad U Baahan Tahay Hurdo Iyo Nasasho Badan - Daryeel Magazine
Hurdada iyo in qofku qaato qaddar nasasho ah oo ku filani waxa ay keentaa deganaasho xagga ruuxda iyo jidhkaba ah oo lagama maarmaan u ah nolosha aadamaha.
hurdada waxa lagu tilmamaa mid ka mid ah arrimaha ugu muhiimsan ee jidhka aadamuhu u baahan yahay ee aanu la’aanteed sameyn karin wax dhaqdhaqaaq ah hawl maalmeedkiisa gaarka. hurdada yaridu waxa ay keentaa dhibaato xagga jidhka iyo caafimaadka ah, jidh ahaan iyo nafsi ahaanba.
haddaba hurdada habeenimadu waxa ay ka faaido badan tahay ta maalinimo. waxa aynu eegidoonaa afar arrimood oo tilmaamaya inaad baahi badan u qabto hurdo iyo nasasho badan waxaana ay kala yihiin:
gaajo aad dareento: haddii aad dareento gaajo aad u xeel dheer waxa ay tilmaamaysaa in aad hurdo u baahi qabto, cilmi ahaan waxa la ogaaday qofka oo ku yaraato hurdadu in jidhkiisu soo daayo dheecaanka loo yaqaano GERELINE oo ah hormoonka qofka dareensiiya gaajada.
cidhiidhi xagga nafsada ah: qofka oo dareema cidhiidhi iyo lab xidhnaan badani waxa ay astaan u tahay in qofkaasi aanu is dareensanayn ee uu baahan yahay hurdo ku filan, hurda yaridu waxa ay sababtaa cidhiidhi iyo diiqad qofka la soo derista oo aanu dareemin raaxo nafeed. xataa wakhtiyada qaarkood waxa dhaca in haweenku iyo caruurtu haddii ay dareenmaan hurdo yaraan ay jeclaystaan cidhiidhi darteed inay ooyaan si ay u nafisaan. hurdo la’aantu waxa ay sababtaa hamar darro xagga caadifadda ah oo keenaysa cidhiidhi iyo isku buuq.
xusuus la’aan qofka haleesha: awood la’aanta xaga dareenka ah iyo ilowshiyaha badani, waxa ay astaan u tahay in aanu qaadan hurdo waafi ah oo naftiisu u baahnayd in qaato, ilowga badani waa astaan tilmaamaysa in qofka wax si ka yihiin oo aanu boqolkiiba boqol nafsad ahaan hagaagsanayn, taasina waa astaan muujinaysa daganaansho la’aan hurdo la’aani sabab u tahay.
fir-fircoonida oo qofka ku yaraata: haddii lagaa waayo dareen fir-fircoon iyo nashaad xaga jidhka iyo maskaxda ah waxa la garan karaa in aanad helin hurdo kugu filan.
“ogsoonow daalka iyo caajiska badani waa astaan muujinaysa in aanu qofku xaalad habboon ku jirin”
6 Arrimood Oo Ay Tahay Inaad Ka Fogaato Hurdada Ka Hor!!! Psychology: Waxyaabo Aad U Baahan Tahay Inaad Ogaatid 10 Calaamadood Oo Ku Tusaya Inaad Ku Taagan Tahay Jidka Guusha Waxaad U Baahan Tahay Qof Ku Fahma Oo Riyo Kula Wadaaga